www.nainglinn.blogspot.com: တရားဂုဏ်တော် ၆ ပါး ( The Six Supreme Qualities Dhamma )
တရားဂုဏ်တော် ၆ ပါး ( The Six Supreme Qualities Dhamma )
၁။ သွာက္ခာတော ( Svākkhāto = Well-Proclaimed by the Blessed One )
= ဘုရားမြတ်စွာ ဟောညွန်ပြတဲ. အမှန်မြတ်တဲ. ဂုဏ်တော်
၂။ သန္ဒိဋ္ဌိကော ( Sandiṭṭhiko = be able to directly experienced by oneself )
= ကိုယ်တိုင်ကျင်.ရင် ကိုယ်တိုင်သိရတဲ. သန္ဒိဋ္ဌိကော ဂုဏ်တော်
၃။ အကာလိကော ( Akāliko = gives immediate result here and now )
= ချက်ချင်းအမြန် အကျိုးရလို. အကာလိက ဂုဏ်တော်
၄။ ဧဟိပဿိကော ( Ehipassiko = invites one to come and experience it )
= လာပါ ကျင်.ပါ ဖိတ်ခေါ်အပ်တဲ. အမှန်မြတ်တဲ. ဂုဏ်တော်
၅။ သြပနေယျိကော ( Opanayiko = leads straight to the liberation )
= နိဗ္ဗာန်သို့ ဆောင်ပို့တတ်သော မဂ်တရားလေးပါး ဂုဏ်တော်
၆။ပပစ္စတ္တံ ဝေဒိတဗ္ဗော ( Paccattaṃ veditabbo viññūhi = any wise person (noble disciples "Ariyas") can realize the results )
= အရိယဆို၊ ကိုယ်စီ သိလို. ခံစားအပ်တဲ. ဂုဏ်တော်
Credit to = World Of Wisdom
OS နှစ်မျိုး ပြောင်းလဲသုံးစွဲနိုင်မည့် Tabletသစ်Sa...
Google Edition Galaxy S4 နဲ့ HTC One
တရားဂုဏ်တော် ၆ ပါး ( The Six Supreme Qualities Dha...
ဘာကြောင့် တောင်ဝင်ရိုးစွန်းက မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းထက်...
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပါဝင်သော Router
အနာဂတ် ဖောက်ထွင်းမြင်ရမည့် ကိုယ်ပျောက်ကား
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ထုတ် တိုင်းမဂ္ဂဇင်းအား...